Microstation Geographics, ikhonkco kwindawo yogcino lwedatha- iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Microstation Geographics, qhagamshela kwiDatabase
I-Microstation Geographics, qhagamshela kwiDatabase
Nangona i-Geographics ingumxholo welifa leBentley, emva kweMephu yeBenley kunye neCadastre apha ukuhlala apha, nakhu amanqaku athile kumfundi ofuna ukudibanisa isiseko sedata yeeprograms zeprojekthi.
Kwisithuba esithile ndacacisa ngaphambi kokuba ezinye iindawo zokusebenza zeGeographics zisebenza njani, esi sishwankathelo sokungena kwe-15 sibonisa ukuba ndandiyithanda kakhulu.
Qhagamshelana neprojekthi yendawo
Ngenisa kwiifayile zobume
Yakha udidi lwegrid
Abanye mahluko neBentley Imephu
UPhuhliso kunye neVBA
Hambisa kwi-Bentley Imephu
Ukutshaya noG! Zixhobo
Kwenzeka ntoni ukuba iJografi yayihlala injalo, isoftware ekufuneka yaziwe ukuba itshaye izinto ukuze iyenze kwinqanaba lomlawuli. Ngelixa abasebenzisi kuye kwafuneka bafunde ukwenza iindlela ezisisiseko zokuyisebenzisa, kodwa sisixhobo nangona i-Bentley ingaphenduli ngenkxaso, isakhuselwe izinyo kunye nezikhonkwane ngabasebenzisi abangafuniyo ukuyishiya.
IJografi inokuqhagamshelwa ubuncinci kwi-Oracle, SQLServer okanye kwindawo yolwazi yokufikelela, ngokukhethekileyo nge-ODBC, nangona ingezizo kuphela iziseko zedatha okanye kuphela kwendlela yonxibelelwano. Unxibelelwano luyile, njengoko ndicacisile kwinto 6 yoluhlu oludlulileyo.
I-Geographics, kulezi nguqulelo, isebenza ngekhonkco zoxhumo lwezinto (ukungena), onokuba ngumgca, inqaku, iseli, okanye ipoligoni. Olu nxibelelwano lusebenza ngolu hlobo lulandelayo:
Into edibanisayo kufuneka ibe semaphu, cinga inombolo yebhanki yefom ye425876.
I-MsLink iyinombolo engaphendulwanga kwimephu kwaye inxulumene xa into edibeneyo kwi-database.
I-MapID yinkalo edibanisa i-mslink kunye nemephu ebhalisiweyo, ngoko i-MsLink inokuphindaphindiwe ukusuka kwimephu enye ukuya komnye, umahluko kumbolo yokubhalisa imephu, into endiyichazile kwincandelo 12 yoluhlu oluphezulu.
Nje ukuba kunxibelelene, kunokwenzeka ukuba ujonge ezinye iitafile zedatha kwiJografi, ezinje ngobhaliso lomhlawuli werhafu, amaxabiso e-cadastral ...
Ukuze usebenze kunye neprojekthi yeGeographics, isiseko sedatha kufuneka sibe neetafile ezilandelayo:
Ukongezelela, itafile ofuna ukudibanisa nayo, njengerejistra irejista (cinga ukuba kubizwa fichaikholamu ebizwa ngokuba yi-MsLink kufuneka yongezwe kuyo, njengoko ndiyibhalayo, kunye no-M no-L ngoonobumba abakhulu. Kwaye oku kufuneka kube kuluhlobo oluzenzekelayo, ke ngalo lonke ixesha kwenziwa ikhadi elitsha linikwa inani elingasayi kuphinda.
Iikholamu ezilandelayo kufuneka zongezwe kwithebula:
ummandla, igama lale kholamu alinamsebenzi, yintoni ebalulekileyo kukuba linani elinendawo ezimbini zokugqibela. Oku kuya kuba kukuhlaziya indawo yepropathi kwindawo yogcino lwedatha.
Umjikelezo, njengangaphambili, ukugcina ixabiso lemali yamacandelo.
x1, y1, x2, y2. Ezi ziikholamu ezine apho uququzelelo oluchaza uluhlu lwepropathi luya kugcinwa, kwaye luya kuba luncedo ukuya kwipropathi (fumana) ekhethiweyo, nje ukushicilela kwi-Geoweb Publisher.
Emva koko, kwisiseko sedatha, kwitafile ye-mscatalog kuya kufuneka ubandakanye itafile yobhaliso kwaye unike isazisi kuyo. Oku ukuze itafile ibonwe kwiJografi kwinyathelo elilandelayo kwaye ibhaliswe kwikhathalogu.
Imephu kufuneka ibhaliswe, oku kwenziwe oko Iprojekthi / ukusetha / imephu yerejista / idifa yefayile. Ngale nto, imephu ifumana inani kwitafile ze-ugmaps.
Itafile ezenziweyo kufuneka zenziwe ngokwejografi. Kule nto kufuneka uye kuyo Iprojekthi / isethaphu / iteksi yeeteksi. Nantsi yenziwe, ibeka i-TICKET egameni, MSLINK (ngoonobumba abakhulu) kwisitshixo sokuqala kunye ne-alias, kule meko i-FC. Emva koko Qalisa. Ngale nto, sikulungele ukudlala ngothando.
Into iya kudibaniswa kwintsi etafileni ficha, ngokusebenzisa mslink njengeyona nto ephambili kwaye isekelwe kumdlalo kunye nekholomu key_chart.
Kuya kubakho umdlalo okhethekileyo phakathi kwento enokunxulunyaniswa (masithi inombolo yethokheni kwimephu) kunye nesazisi kwirejista. Isenokuba linombolo yefayile okanye isitshixo se-cadastral, kodwa akufuneki iphindwe kwimephu enye.
Ukudibanisa, a ucingo, ngoko Umgcini-siseko / umphathi weetekisi. Sishiya kuphela inqanaba lenombolo ye-chip, ukuya kwiligi. Emva koko sikhetha igama letafile apho sifuna ukudibanisa kunye nekholamu equlethe umdlalo. Kule meko, itafile yeTab kunye nekholamu key_chart.
Qalisa ukhetho Sebenzisa uFence, sikhetha iqhosha joyina kwaye sicofa kwisikrini.
U lungele I-Gegraphics yafuna zonke ezo zixhobo zeenombolo zep chip kwimephu, ehambelana nenombolo ye-chip data kwitafile ficha kunye nekholomu key_chart. Kwaye wenza i-flirt nge mslink amanani azenzekelayo akhoyo kwikholamu. Indlela yokuyivavanya isebenzisa lo myalelo iimpawu zokuphonononga, kufuneka iphakamise ithebula ehambelana nayo.
Ukuhlaziya indawo kunye ne-perimeter, amanqanaba asele asebenzayo okanye Iimbonakalo Umda womhlaba kunye nebhloko, kunye neecentroids. Emva koko yenziwe I-database / indawo ye-perimeter u
Ukuhlaziya izilungiso, Uvimba / ulungelelaniso lokuhlaziya.
Faka kukudala irekhodi elitsha kwiziko ledatha, update ukwenza uhlaziyo.
Ndiyazi, kwaye ndiyazi. Ngoku uyasiqonda isizathu sokuba ezi zinto zizenzekelayo ngezixhobo zeVBA ...
Nangona kunjalo, ukufunda ukuqonda kwayo yayikukuzilolonga kwengqondo okwakhula inxenye yengqondo yethu. Inkqubo ye- Umlawuli weGeospatial Kwakhona iiflethi zayo.
Ukuthetha nabantu baseTyent
I-Farmville, eyona nto iphambili yeentanethi